Tantaran’i Indonezia: Nihamaro ny Misionera, avy eo Voarara ny Asa
Neken’ny Minisiteran’ny Fitsarana ny hanoratana ny Fikambanan’ny Mpianatra Baiboly ho ara-dalàna, tamin’ny 9 Jolay 1964. Tsy tena hanana fahalalahana anefa ny Vavolombelona, raha tsy voasoratra tany amin’ny Minisiteran’ny Raharaha Ara-pivavahana. Niara-niasa tamin’ny Sampan-draharaha Momba ny Raharaha Kristianina io minisitera io, nefa Protestanta hiringiriny ny mpiasa tao sady tsy tia maizina Vavolombelon’i Jehovah.
Nihaona tamina manam-pahefana ambony ny rahalahy iray indray andro. Niara-niasa akaiky tamin’ny Minisiteran’ny Raharaha Ara-pivavahana izy io. Hay nitovy fiaviana izy ireo, ka nafana erỳ ny resany sady nataony tamin’ny fitenin-drazany. Noresahin’ilay rahalahy tamin’ilay rangahy ilay olana eo amin’ny Vavolombelona sy ny Sampan-draharaha Momba ny Raharaha Kristianina. Nataon’ilay rangahy àry izay hihaonan’ny rahalahy telo tamin’ny minisitra, izay Silamo tsara fanahy. Namoaka didy ilay minisitra tamin’ny 11 Mey 1968 fa fivavahana ara-dalàna ny Vavolombelon’i Jehovah, ary manana zo hanao ny asany eto Indonezia.
Nilaza koa ilay rangahy fa tsy mila mandalo any amin’ny Sampan-draharaha Momba ny Raharaha Kristianina ny misionera rehefa haka vizà. Misionera 64 àry no tafiditra teto nandritra ny taona vitsivitsy.
Misionera sy mpisava lalana manokana 300 teo ho eo ary mpitory 1 200 mahery no nitory ny vaovao tsara eran’i Indonezia, tamin’ny 1968. Tena nampiofana an’ireo rahalahy teto ny misionera, ka lasa nandroso haingana izy ireo. Tonga ara-potoana ireny fampiofanana ireny satria tsy ela dia tonga ny fanenjehana.
Fanomezana krismasy ho an’ny mpitondra fivavahana
Mbola nitady fomba handrarana ny asantsika ihany ny Sampan-draharaha Momba ny Raharaha Kristianina, tamin’ny 1974. Nanoratan’ny talen’io sampan-draharaha io daholo ny biraom-paritry ny Minisiteran’ny Raharaha Ara-pivavahana, ary nilazany fa tsy ara-dalàna ny fivavahantsika. Nasain’ilay tale nanao zavatra avy hatrany ny manam-pahefana raha vao miteraka “olana” ny Vavolombelona. Fitaomana an-kolaka azy ireo hanenjika ny vahoakan’i Jehovah izany. Tsy niraharaha an’ilay izy ny ankamaroan’ireo manam-pahefana. Nisy kosa nanararaotra an’izany mba handrarana ny fivoriantsika sy ny fitoriana isan-trano.
Noresahina tao amin’ny gazety iray tamin’ny 24 Desambra 1976 fa voarara ny asan’ny Vavolombelon’i Jehovah
Nikasa hanao fivoriambe iraisam-pirenena teto Jakarta ny Filan-kevitry ny Fiangonana Maneran-tany, tamin’izay fotoana izay. Tezitra anefa ny Silamo. Nihanihenjana ny tady, ka nofoanana indray ilay fivoriambe. Lasa olana be anefa ny resaka fitaomana olona hiova finoana, ka sorena ny mpanao politika maro. Nanome tsiny ny Vavolombelon’i Jehovah ny mpitondra fivavahana noho ny asa fitoriana ataon’izy ireo. Lasa betsaka àry ny manam-pahefana tsy tia antsika.
Notafihin’i Indonezia i Timaoro Atsinanana, zanatany portogey teo aloha, tamin’ny Desambra 1975. Ny korontana ara-pivavahana anefa mbola nitombo. Resy i Timaoro Atsinanana fito volana tatỳ aoriana, ka lasa nohindrahindraina ny fitiavan-tanindrazana. Tsy nanao politika ireo rahalahy sady tsy nety nanao miaramila na nanangan-tsaina, ka romotra ireo manamboninahitra tao amin’ny tafika. (Mat. 4:10; Jaona 18:36) Nanararaotra an’izany ny mpitondra fivavahana ka notereny hanenjika ny Vavolombelona ny fanjakana. Nahazo fanomezana krismasy izy ireo tamin’ny tapatapaky ny Desambra 1976, satria nilaza ny fanjakana fa voarara ny asan’ny Vavolombelon’i Jehovah.
Indonezia: Nihamaro ny Misionera Tonga